Madaxweyne Xasan iyo Qaramada Midoobay oo ka wada hadlay caqabadaha jira – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxweyne Xasan iyo Qaramada Midoobay oo ka wada hadlay caqabadaha jira
A warsame 13 August 2014 14 August 2014
Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay galab aqalka madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho kula kulmay wakiilka xog-hayaha guud ee Qarammada Midoobay u qaabilsan arrimaha nabadgelyada iyo ammaanka Peter Thomas Drennan.
Warsaxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in Xasan Sheekh Maxamed iyo Peter Drennan ay ka wada hadleen caqabadaha kala duwan ee haysta dowladda federaalka ah iyo sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhexeeya dowladda iyo Qarammada Midoobay.
Wakiilka xog-hayaha guud ee Qarammada Midoobay u qaabilsan arrimaha nabadgelyada iyo ammaanka Peter Thomas ayaa bogaadiyay horumarrada ay samaysay dowladda Soomaaliya labadii sano ee la soo dhaafay, isagoo xusay in Qarammada Midoobay ay ka go’an tahay xoojinta taageerada Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca ammaanka.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale hadlay dhibaatooyinka bani’aadannimo ee ku soo fool leh qeybo ka tirsan dalka,wuxuuna ka codsaday Qarammada Midoobay iyo beesha caalamka inay gargaar bani’aadannimo gaarsiiyaan dadka dhibaateesan, si looga hortago inay dhacdo abaar lamid ah tii sanadkii 2011-kii ka dhacday Soomaaliya.
Xog-hayaha guud ee Qarammada Midoobay Ban Ki-moon ayaa dabayaaqadii bishii April ee sanadkan wakiilkiisa arrimaha nabadgelyada iyo ammaanka u magacaabay Peter Thomas Drennan oo u dhashay dalka Australia, isagoo baddelay Kevin Kennedy oo u dhashay dalka Mareykanka.
Wafdi ka socda 15-ka dal ee Golaha Amaanka oo laga sugayo Muqdisho
10-ka Jaamacadood ee ugu tayada badan dunida Carabta